Koror dhalinta isticmaasha Waxyaabaha Maanka Dooriya oo ku soo... | Universal Somali TV
Koror dhalinta isticmaasha Waxyaabaha Maanka Dooriya oo ku soo badanaya Wajer
Hogaamiye yaasha iyo waalidiinta ka soo jeeda ismaamulka Wajer ee Gobolka Waqooyi bari ee kenya ayaa waxaa loogu baaqay in ay dadaal dheer u galaan sidii da.yarta looga ilaalin lahaa waxyaabaha maanka dooriya oo ay caadadad ka dhigteen.
Dhalinyarada ay da,dooda ka yartahay 20 jirada ee ka soo jeeda wajer ayaa mudooyinkii la soo dhaafay waxaa ku badanayay isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya Taasi oo walaac ku abuurtay bulshada reer Wajer.
Prof Sh Maxamud Nunow oo ka mid ah culimada magalada wajer ahna La taliyaha Barasaabka wajer ayaa ugu baaqay dowlada goboleedka wajer in ay xooga saarto sidii Lagu xakameyn lahaa dhalinyarada wali ku jirta waqtiga waxbarashada ay caadeystay isticmaalka waxyaabaha Maanka Dooriya.
Dadka qaar ayaa u aaneynaya arintaan mid ku timid shaqo la,aanta heysata dhalinyarada iyo kala taga waalidiinta ee xili hore taasi oo keenta in ay ubadka waayaan waalid wada jir ah oo la socda xaalada uu markaasi dhexmaquuranayo.
Mr Nunow oo u waramayay Universal ayaa ugu danbeyn sheegay in ka culimo ahaan ay ku dadaali doonaan sidii bulshada loogu sameyn lahaa Baraarujin looga Hortagayo isticmaalka Muqaadaraadka ee ku soo badanaya wagaalada Wajer.
Kan-xigaSwitzerland oo Ka Taageereysa Kenya L...
Kan-horeMadaweyne Ordogan oo Wacad ku Maray H...
Maxkamada sare ee masar oo ayiday musuq maasuqa lagu eedeyay xusni mubarak iyo labadiisa wiil
Imran khan oo dhaliilay go,aanka hindiya ay uga baxday wadahadal ka labada dal
39,219,567 unique visits